Ungayifumana njani i-OKPO nge-TIN? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ungayifumana njani i-OKPO nge-TIN?
Ngoku kwi-Intanethi unokufumana ulwazi oluninzi oluyimfuneko. Ngokwenyani, kuye kwafuneka ndikhangele inombolo ye-OKPO yombutho wam.
Ikhowudi ye-OKPO (emfutshane kwi-All-Russian Classifier yamaShishini eMibutho) yeyona iphambili kwiinkqubo zeRosstat. Ungayibona ngeendlela ezininzi. Indawo yandinceda
skrin.ru. Udinga ukufaka igama lombutho kuphela (ndibhalile ngegama lentloko, uhlobo lobunini kunye nommandla, kwimeko leyo), ndibeka ichaphaza kwibhokisi ye-OKPO, ikhadi lolwazi lenkampani livula, apho kuboniswa ikhowudi ye-OKPO.
Ukuba i-TIN yenkampani iyaziwa, ungafumanisa ngewebhusayithi ye-Federal tax Service, faka i-TIN yenkampani, ifestile enedilesi yayo iya kuvulwa. Ngokutsala umnxeba wesithili, unokufumana ikhowudi ye-OKPO.
Ukuba uhlobo lweshishini luyaziwa, ungajonga kwi-Intanethi (okanye tsalela umnxeba isebe lendawo laseRosstat) leliphi na uhlobo lomsebenzi oluhambelana nolu hlobo lomsebenzi.
Unokufumaneka kwiifom zobalo zale nkampani
Ungacela ukukhutshwa kwirejista kwinkonzo yeRhafu yendawo. Kuyinyani, kuyahlawulelwa, kodwa kwisicatshulwa kuya kubakho ulwazi oluninzi malunga nombutho.
Ungaqhagamshelana ne-ofisi yendawo yaseRosstat ngesicelo sokukhutshwa kweleta yolwazi ngeekhowudi zonke.
Ungafumanisa ngeli khonkco kule ndawo: http: //egrul.nalog.ru/ La manani, ikhowudi ikomiti yolawulo-manani elinika imibutho, kufuneka ufake i-TIN kwibhokisi eyehlayo kwaye ikhowudi yombutho oyifunayo kufuneka ivele.
Ukongeza kolu nxibelelwano, kukho ukhetho lokukhangela kwi-Intanethi, umzekelo, apha Lonke ulwazi olukwikhowudi, kodwa ngokuthathela ingqalelo uyazi ukuba wenza ntoni umsebenzi. Unokutsala umnxeba kuRosstat, bayakuthi nekhowudi apho.
Ukuba uyazi kuphela inombolo yokuchongwa kwerhafu yomrhwebi okanye inkampani, kufuneka undwendwele iwebhusayithi esemthethweni yeNkonzo yeRhafu kwaye ucofe inkampani i-TIN kwi-pop-up window, kwaye uya kunikwa idilesi yombutho, ikhowudi ye-OKPO yalo mbutho. Idilesi yeFTS - nayog.ru
Kunokwenzeka ukuba ufumanise ikhowudi ye-OKPO TIN. Ukwenza oku, kufuneka ube nesazisi sakho somrhwebi okanye inkampani. Okulandelayo, kuya kufuneka uye kwiwebhusayithi esemthethweni ye-Federal tax Service kwaye ufake i-TIN yenkampani kwi-pop-up window, kwaye uya kunikwa idilesi yombutho oyilindeleyo. Emva koko, ungatsalela umnxeba umlawuli wesithili, apho unokufumana khona ikhowudi ye-OKPO. Unokusebenzisa le nto inkonzoUkufumana i-OKPO kwi-Intanethi.
Kalula Biza ii-IFTS apho bafumene i-TIN.
Fumana iifowuni ze-IFTS kuGoogle. IFTS inombolo yokuqala enamanani ama-4 kwi-TIN.
Yiya kwisebe elisemthethweni lenkonzo yerhafu, apho, ngena kwindawo ye-TIN ecetywayo yombutho ofunekayo. Uya kubona ukuba idilesi yombutho iya kuvulwa, kukho ulwazi malunga neefowuni ezikhoyo. Ngoku, ngomnxeba, unxibelelana nolawulo lwesithili, apho baya kukuhambisa khona kunye nekhowudi ye-OKPO. Ukongeza, kukho indawo okpo.ru. Unokufumana ulwazi ngayo, kwaye yintoni ngakumbi, malunga nexesha kunye nesimahla.
Onke amaziko asemthethweni afumana ikhowudi ye-OKPO. Inombolo ye-OKPO ihlala inamanani asibhozo okanye alishumi. Inombolo ye-OKPO ihlala ikwiikuki zombutho, ukuze ufumanise ngokujonga itywina. Unganxibelelana nesebe laseRosstat ngokugcwalisa isicelo sekhowudi. Ngenxa yoku, uya kudinga idatha yokundwendwela ye-TIN kunye nesitifiketi sobhaliso lwezinto zomthetho.
I-OKPO yenye yeekhowudi zeenkcukacha. Xa ndadlulisela iingxelo kwingxowa-mali yepenshini kwaye kwafuneka uFSS afumane le khowudi. Iwebhusayithi yeenkcukacha-manani (kwingingqi yeNizhny Novgorod) inale unxibelelwano, ekuvumela ukuba ufumane i-OKPO nge-PSRN okanye nge-TIN. Mhlawumbi ayizizo zonke iikomiti zedatha ze-oblast, onazo kufuneka uqhagamshelane nesebe lakho lengingqi.
Bendidla ngokuchwetheza kuGoogle quot; INN 6 .... (inani) quot;, ngenxa yoko, kwiziza ezininzi zonke iinkcukacha zenkampani
Eyona ndlela ilula nethembekileyo yokufumana ikhowudi ye-OKPO ukuba kukho ikhowudi ye-TIN kukundwendwela iwebhusayithi ye-okpo dot ru. Inesiseko sedatha enkulu yamashishini: I-EDRPOU, i-OKPO kunye nabanye. Kuyinyani, imfuneko yokufikelela ubhaliso.
Fumana i-OKPO nge-TIN ungabi nzima. Lonke ulwazi lufumaneka simahla kwi-Intanethi.
Ikhowudi yeenkcukacha-manani ze-OKPO, inikezelwe kumbutho yiKomiti yeNkcazo-manani yePhondo.
Kulapho ulwazi lwekhowudi lukhona. Ungafumana inombolo ye-OKPO kwindawo yokugcina idatha kwiwebhusayithi yezibalo ngokungena kwi-TIN apho.
Ifumene indawo enjalo: okpo.ru - konke -hlulahlulwa kweRussia kwimibutho. Ndaya kwithebhu ye-quot; Khangela OKPOquot; ungene kwi-TIN yombutho wakhe kunye nabanye ababini esisebenzisana nabo. Kuzo zontathu iindlela, kuphela kwinkqubo yeTIN ibonise i-OKPO echanekileyo. Ukukhawuleza kwaye kulula, kwaye akukho sidingo sokuthumela naziphi na izicelo.
Imibuzo ye-22 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,259.